Jonga ezi ziTayile zilula kodwa ziziClass Aso Ebi ukukhuthaza iVeki yakho yeVeki | Uhlobo Rave
Oktobha 8, 2017
I-10 times VANESSA HUDGENESISenzile ukuba siwe ekuthandeni ngesimbo sakhe se-Bohemian
SNgexesha laseNigeria alugqitywanga ngaphandle kokusebenza okanye enye i-aka owambe. Akumangalisi ukuba ibhalwe njenge 'esemthethweni owambe day 'eNigeria. Lolo suku lweveki xa siphuma siyokubhiyozela kwitheko elinye okanye elinye nosapho kunye nabahlobo. I-Owambe eNigeria akukho nto yokudlala yabantwana njengoko zihlala zinkulu, ziyonwabisa kwaye zithwele ii-ensembles ezinesitayile ngenye indlela eyaziwa ngokuba Aso Ebi.
Njengondwendwe lomtshato olunencasa ye-minimalist, uzifumana uphinda-phinda kwiimeko apho ungenakuthatha isigqibo kwisitayela esithile sokutsala kwi-owambe yakho elandelayo. Ukukhetha indlela elula kodwa enesitayile kubonakala ngathi ngumceli mngeni kuwe kuba ujonge ukoyikisa okanye uphakamise umtshakazi - edla ngokuba yinjongo yenkoliso yeendwendwe ezininzi zomtshato ngeli xesha -Kodwa ujonge phambili ekunxibeni i-ensemble yakho enesitayile kunye nokuba nexesha elimnandi emcimbini. Ngenxa yakho, siye sazikhusela iindlela ezili-10 ezilula kunye nezitayile ze-Aso Ebi zokuncedisa ekubulaleni ngokulula.
Ityala lemifanekiso: IG njengoko ikhutshiwe
isibhengezo se-anna IAsoebi Ukubulala kukaAsoebi Izitayile ze-asoebi Hafsah Mohammed Hafymo UPowede Eniola Lawrence URonke Fella Tarmar Awobotu Tostos
Dumisani u-Abu Oktobha 8, 2017
Iindlela ezili-15 zokuSitayela Isikhuseli seMidi njengohlobo oluqinisekisiweyo lwesitayile
Ezona ziTayile zintle ziBalaseleyo zaBakho kule Veki ephelileyo zazingabaFab ngokupheleleyo!
Isikhokelo soCwangciso lomtshato saseNigeria